Valentine Day ရဲ့သမိုင်းကြောင်း ( သို့ ) Valentine Day ကိုဖြစ်ပေါ်လာစေခဲ့တဲ့ ရောမဘုန်းကြီးရဲ့ကြေကွဲစရာဖြစ်ရပ် - XYZ NEWS
Valentine Day ရဲ့သမိုင်းကြောင်း ( သို့ ) Valentine Day ကိုဖြစ်ပေါ်လာစေခဲ့တဲ့ ရောမဘုန်းကြီးရဲ့ကြေကွဲစရာဖြစ်ရပ်
February 13, 2020 By Editor LOVE
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့မှာ အမေရိကန် နဲ့ အခြားသောနိုင်ငံတွေမှာ ချစ်ခင်ရသူတွေအချင်းချင်း သကြားလုံးတွေ ချောကလက်တွေ ပန်းစည်းတွေ ပေးကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီ Valentine Day ရဲ့ အဓိပါ္ပယ်က ဘာလဲ ? ဘယ်ကနေ ဆင်းသက်လာတာလဲ ? အခု ရှာကြည့်ရအောင်ပါ။
ဖေဖော်ဝါရီလဟာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ လတစ်လဖြစ်တာကို ကျွန်တော်သိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် St.Valentine Day လို့ခေါ်တဲ့ Valentine Day ကတော့ အမေရိကန်နဲ့ရော ရောမသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပါ သက်ဆိုင်နေပါတယ်။
သမိုင်းတစ်ခုကတော့ St.Valentine ဟာ BC3ရာစုက ရောမဘုန်းကြီးတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ ရောမဘုရင် Claudius2ဟာ စစ်တိုက်တဲ့နေရာမှာ အိမ်ထောင်ရှိယောကျ်ားတွေထက်လူပျိုတွေက ပိုအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာကို သိခဲ့ပြီးနောက် လူငယ်တွေရဲ့ လက်ထပ်မှုကို တားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မတရားမှုကို သိတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီး St.Valentine ဟာ လက်ထပ်ပွဲတွေကို တိတ်တဆိတ်လုပ်ဆောင်ပေးနေခဲ့ပါတယ်။ St.Valentine ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကို ဘုရင်က သိသွားတြ့အခါမှာတော့ ကွပ်မျက်ခံရပါတော့တယ်။
အခြားပုံပြင်တွေကတော့ Valentine ဟာ ရောမထောင်မှာ နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခံနေရတဲ့ ခရစ်ယာန်လူမျိုးတွေကို ထွက်ပြေးဖို့ကူညီတဲ့ အတွက် အသတ်ခံရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပုံပြင်တစ်ခုအရတော့ ထောင်ကျနေတဲ့ Valentine ဆိုတဲ့သူဟာ ” Valentine” ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို သူ့ကိုယ်သူ မိတ်ဆက်တဲ့ အနေနဲ့သုံးခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ သူအကျဉ်းကျနေတုန်း လာတွေ့တဲ့ ထောင်စောင့်ရဲ့ သမီးဖြစ်သူကို ချစ်မိသွားခဲ့ပြီး သေဒဏ်ပေးမခံရခင် အဲ့ဒီမိန်းကလေးဆီကို ” From your Valentine ” အစချီတဲ့ စာကို ရေးထားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ အသုံးအနှုန်းဟာ ယနေ့အထိ သုံးစွဲနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ Valentine Day နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ သမိုင်းကြောင်းတွေက အမျိုးမျိုး ရှိနေကြပေမယ့် သူတို့ထဲက Valentine ရဲ့ အကြောင်းကတော့ သူရဲကောင်းဆန်ပြီး အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ နေရာက ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီသမိုင်းကြောင်းတွေကြောင့် အလယ်ခေတ်လောက်မှာ St.Valentine ဟာ အမေရိကနဲ့ ပြင်သစ်မှာ အကျော်ကြားဆုံး ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အလယ်ခေတ်က အမေရိကနဲ့ ပြင်သစ်တို့ရဲ့ အယူအဆအရ
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့မှာ ငှက်တွေ မိတ်လိုက်တဲ့ ရာသီရဲ့အစဖြစ်လို့ အဲ့ဒီနေ့ဟာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ နေ့တစ်နေ့ဖြစ်သင့်တယ်လို့ ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။
Valentine Day ကို ကနေဒါ၊ ပြင်သစ် ၊ အမေရိကန် ၊ မက္ကစီကို ၊ ဩစတြေးလျ တို့မှာ စတင်ကျင်းပခဲ့ပြီး အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာတော့ ၁၇ ရာစု လောက်မှ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်ကျင်းပလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ၁၈ ရာစုအလယ်ပိုင်းလောက်မှာ သူငယ်ချင်းအချင်းချင်း မိတ်ဆွေအချင်းချင်း ကြားမှာပါ တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက် ခံစားချက်တွေကို စာတိုလေးတွေ ပေးပြီး ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ Valentine Day ရဲ့ ရေပန်းစားမှုကြောင့် အဲ့ဒီနေ့တွေမှာ စာပို့ခနှုန်းထားတွေကိုတောင် လျှော့ချပေးခဲ့ပါတယ်။ Greeting Card Association ရဲ့ အဆိုအရ နှစ်တိုင်း Valentine နေ့မှာ စာပို့ကတ်ပေါင်း 145 ခုလောက်ပို့ရပြီး ကမ္ဘာ့ ဒုတိယအများဆုံး စာပို့တဲ့နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲက 85 ရာခိုင်နှုန်းကို အမျိုးသမီးတွေက ဝယ်ယူခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Writer – Min Thu (Daily Hot News)